Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jebinta ee Taiwan » Taiwan Bracing ee Imaanshaha Super Typhoon Chanthu
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dekedda Nanfang'ao oo doonyo ku xaniban yihiin - waxaa iska leh sawirka CNA
Duufaan -Super - Chanthu - ayaa qarka u saaran Taiwan waxaana la filayaa inay si toos ah ugu dhufato Taipei berri, Sabtida, Sebtember 11, 2021.
Duufaanta 'Super Typhoon' hadda waxay leedahay dabaylo waara oo ugu badan oo ah 180 mph taasoo ka dhigaysa duufaanta qaybta 5.
Jidka Chanthu wuxuu toos ugu hoggaaminayaa Taiwan iyo magaalada Taipei.
Duufaanada Atlhough ayaa ku badan dalka, waxaa la filayaa in duufaantan ay keeni doonto dabayl iyo roob xoog leh, oo sababi doonta fatahaad aad u daran iyo dhulgariir dhici kara.
Chanthu waa mid aad u awood badan oo leh dabaylo joogto ah oo joogto ah oo ah 180 mph, taasoo ka dhigaysa duufaanta qaybta 5 ee halista ah. Khabiirada cilmiga saadaasha hawada ayaa si taxaddar leh u daawanaya Super Typhoon Chanthu gaar ahaan sababta oo ah kaliya ma aysan lumin awoodeedii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, dhab ahaantii way sii xoogaysanaysaa.
Saadaasha ayaa saadaalineysa in Chanthu ay u daciifin doonto duufaanta heerka 4 ka hor inta aysan ku soo degin koonfurta Taiwan. Duufaan category 4 ah. Markay duufaantu dhaafto meel u dhow magaalada Taipei, waxaa la filayaa in hoos loogu dhigo duufaanta qaybta 2.
Super Typhoon Chanthu waxay keeni doontaa dabaylo sare iyo roobab aad u daran dhammaan qaybaha, laga bilaabo 5 illaa 2. Duufaannada ayaa qayb ka ah caadooyinka Taiwan, si kastaba ha ahaatee, Chanthu waxay qaadaysaa waddo aan caadi ahayn oo ka qaadeysa gobolka iyada oo ay suuragal tahay inay kordhaan suurtagalnimada dhowr dhaawac. Roobabkan mahiigaanka ah ayaa u badan inay sababi doonaan daadad iyo inay suuragal tahay in dhulku dumo.
Muddo 2 maalmood gudahood ah, dabaylaha joogtada ah ayaa kordhay 130 mph. Kaliya 5 duufaan oo kale ayaa diiwaangeliyay xoojinta degdegga ah, oo ka gudubtay niyad -jabka oo u gudubtay dabaysha qaybta 5 muddo aad u yar, ayuu yiri Sam Lillo, oo ah khabiirka saadaasha hawada Maamulka Badbaadada Qaranka iyo Iskuduwaha (NOAA).
Sida laga soo xigtay Xarunta Duufaanta Qaranka ee Mareykanka, xoojinta degdegga ah waxaa lagu qeexay kororka dabaylaha joogtada ah ugu badnaan ugu yaraan 35 mayl saacaddii 24 saac gudahood. Qaar ka mid ah maaddooyinka muhiimka u ah xoojinta deg -degga ah ee duufaannada kulaylaha waxaa ka mid ah heerkulka dusha sare ee badda, kulaylka xad -dhaafka ah ee badweynta (cabbirka heerkulka biyaha ee ka sarreeya dusha sare), iyo xiiridda dabaysha toosan oo hooseeya.
Biyaha diirran ayaa gacmaha isula taga hawo qoyan oo diirran, waxayna labaduba bixiyaan tamar iyo qoyaan muhiim u ah duufaannada. Xiirashada dabaysha toosan waa farqiga u dhexeeya xawaaraha iyo jihada dabaysha heerka hoose iyo sare. Xiirashada sare ayaa dushooda ka dillaacda duufaannada soo koraya oo daciifiya, halka xiiridda hoose ay u oggolaanayso duufaanno inay dhisaan.
Xafiiska Cimilada Dhexe (CWB) wuxuu saadaalinayaa in marka duufaanku ku xidhmo Taiwan, ay duruufteeda bilaabi doonto inay saamayn ku yeelato waddanka fiidnimadii Jimcaha, roobna u keeni doonto bariga Taiwan. Roob iyo dabayl ayaa sii xoogaysan doona Sabtida, marka roobab mahiigaan ah ay u badan yihiin bariga Taiwan, Magaalada Keelung, iyo Jasiiradda Hengchun. The Taiwanese waxay isu diyaarinayaan intii karaankooda ah, iyadoo meheradaha iyo iskuulada la xiray iyagoo filayay imaanshaha duufaanta.